Gnome Shell, haina kunyanyoipa | Kubva kuLinux
Gnome Shell, haina kushata kudaro
pandev92 | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux
Ndichiri kurangarira apo Gnome SHELL yakanga ichangobuda, yaive vhezheni 3, yakanaka pfungwa, kuita kunotyisa, kutaridzika kwekusarudzika, kwakashata. Ndinoyeuka kuti panguva iyoyo, Kubatana kwaive kuchangobuda, izvo zvaive zvakapesana, chitarisiko chakanaka, asi kuita kunorwadza, nezvinhu zvakaita sechiteshi chengarava zvakanamatira uye waisakwanisa kuzvivanza futi.
Zvakanga zvakaita seizvi, kuti ndakaguma kweinopfuura gore, ndiri vashandisi veKDE, kusvika mavhiki maviri apfuura. Ipapo ndakave nekusangana kwangu naSabayon, kwandakawana rugare, asi nechimwe chikonzero chisingazivikanwe, ndakazopedzisira ndave kurodha pasi GNOME ISO, ndinofungidzira pamwe nekuda kwekunetseka kwandakatoshandisa KDE.
Zviripachena Gnome, yatora mukana mukusaziva uye pamwe vanokonzeresa pamusoro pemakore vanga vari ivo uye kufinhwa kunokonzerwa nharaunda, zvinondiyeuchidza nezvevanhu vanoramba vachishandisa windows xp, nekuti havadi 7 nezvimwe.
Kugadzira chinhu izwi rave richishandiswa zvakanyanya kusabvumidza GNOME 3, asi izwi iri rakanyanyisa, pane vanhu vane fluxbox inzvimbo inobudirira kwazvo, vamwe vanofunga kuti KDE SC, vamwe XFCE nezvimwewo, ndosaka ndisina 't funga kuti mune iyi kesi, zvinogona kutaurwa kuti GNOME SHELL haisi nharaunda inogadzira.
Nekufamba kwenguva ndakadzidza kuti zvese inyaya yekuyedza zvinhu kwechinguva uye kujaira kwavari, ndozvinoita, semuenzaniso, ini ndiri kukwanisa kungova nekubudirira ndichishandisa KDE SC, sekushandisa openbox uye GNOME SHELL hazvisi izvo.
Chinhu chekutanga chinogara chichindibata, kuona kuti kutaridzika kweiyo DE kwagara kuri kunotyisa, zvakanaka zvaive zvakare muGNOME 2 "isina", asi hachisi chinhu chisingakwanise kugadziriswa nemaviri kudzvanya. Ini ndaodhaunirodha iyo Faenza icon pack, uye iyo Elegance theme uye voila.
Zvino kwakauya kwakanyanya kunetsa, svondo rapfuura, ndaifanira kuita rekutsvagisa basa, ini ndaive nema4 windows akavhura, imwe ye pdf, imwe yeWanyori, imwe yebrowser uye imwe yeimwe pdf, zvese zvaive nyonganiso, Kuchinja windows dzakapenga kwandiri, uye basa randaigona kuita mumaawa maviri, zvakatora maawa matatu, asi mazuva maviri gare gare ndakaita rimwe basa ndikaziva kuti ndaijairira nharaunda, uye kuti yakanga ichiwedzera nekuwedzera inokurumidza uye inobudirira nayo.
Ipapo, ini ndakayedza kwazvo vatyairi veNvidia, sezvamuchaona mumawindo ekumahwindo, ini ndaisa nePlayonlinux, Call of Duty Yemazuva Hondo 3, Diablo 3 uye Assasins Zvitendero, ndichishamiswa chose nemagariro aiita, ndakaisa edza shanduko yesarudzo mumitambo uye ini ndaigona kuona kuti pandakangosiya mutambo nharaunda yaive ichiri mukugadziriswa kwayo, iyo iri mu KDE SC yeChakra kana zvikaitika, asi bharaki rebasa, rakadzoserwa kuve diki diki, sekumanikidzwa .
Ndakaedza kupenya kuti ndione kana yanga ichibvaruka, uye hapana chakakwana, saka ndinotenda iro basa riri kuitwa naGNOME neMutter, kuti kunyangwe munyori uyu asina zviwitsi zvemaziso zvakawanda seCompiz kana KWin, iyo inoita mushe. sezvo usinga shandisa amd)).
Zvakatipoteredza zvave kugadzikana, zvichienzaniswa nenguva yekupedzisira yandakange ndambozviedza, nguva dzeGNOME 3.2, ini handina kumbobvira ndaita tsaona kubva pandakaiisa, zvese zvave nyore, asi hei, neGNOME tweak chishandiso, pane zvinhu kunge mabhatani padhuze deredza nezvimwe, izvo zvinogona kudzoserwa kumashure, uye kune zvinhu zvakawanda zvinogona kuchinjika zviri nyore. Zvakare kuchinja madingindira kuri nyore, ingo asiya kumba, .mhemberero uye ndizvozvo.
Iko kusununguka kwekutsvaga kuwedzererwa kwainakidzawo kwandiri, semuenzaniso ini ndinoshandisa iyo yekuwedzera yeMpris 2, iyo inondibvumidza ini kudzora vangangoita vese vatambi, kubva kune odhiyo menyu.
Vazhinji venyu muchabvunza, nei zvese izvi ..., uye mhinduro iri nyore, ini ndaona akawanda akaipa mhinduro nezveGNOME SHELL, uye mumwe nemumwe anogona kuva nemaonero avo, zvingangove zvichishayikwa zvakanyanya, asi panguva imwechete ini hameno, kana avo vakaedza, vanga vachipfuura vhiki nazvo.
Ini ndinogona kutaura kuti GNOME SHELL, haina kushata sekunge ichiedza kuita kuti vatende, uye kuti ndiri kutarisira iyo 3.8, inopinda munzvimbo dzeSabayon. Nekutendiswa kwese ndinogona kutaura kuti hapana nharaunda yakaipa, kana kubereka zvishoma muLinux, nekuti kugadzirwa kunoenderana newe nekugadzirisa nharaunda iyoyo, Kubatana, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, zvese inzvimbo dzakanaka, zvese zvinoenderana newe.
Naizvozvo, ndinokumbira anopfuura mumwe chete anogona, anoda uye ane nguva, yekupa ino nharaunda imwezve kuravira, asi zvakajeka mune distro inoitarisira zvirinani, seOpensuse, Fedora kana Sabayon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Gnome Shell, haina kushata kudaro
Ini ndinobvumirana nepositi, ndinoifarira chaizvo nekuti zvakasiyana zvachose nechinhu chatakashandisa kwemakore, uye nekumwe kushandurwa inova nharaunda yakanaka. Kunyangwe kutaura chokwadi ndakada iyo 3.4 kupfuura iyo 3.6, ini ndichaedza iyo 3.8 gare gare. Mufaro
Rakaipisisa Wallpaper kare. Nyora chero maonero aungave iwe, nezve chero chinhu.
Musikana ane makore 19 ekuberekwa, dambudziko riripi? (Uye ini ndiri makumi maviri)
Izvo hazvina chekuita nezera remukadzi mudiki.
IWP inotyisa hapana chimwezve. 😀
AHhh zvakanaka, icho chimwewo chinhu xD
Computer Guard akadaro
Ndakasarudza kumugamuchira zvakare mu2011 uye ndichiri naye.
Ini ndinobvuma kuti pakutanga kubata kwayo kunoshamisa asi nhasi, pandinofanira kushandisa Gnome2 ini ndinoona kuti inoita kunge yechinyakare uye haina kugadzikana senzvimbo yangu "nyowani".
Ini ndinofunga inyaya yezvose zviri zviviri zvavanofarira uye / kana zvido uye zvekubvuma kutarisana neyedu «bhurasho neshanduko»
Pindura kune IT paDuty
Chaizvoizvo, shure kwezvose, zvese inyaya yekuravira uye kuziva maitiro ekuchinja 🙂
"Asi panguva imwe chete ndinoshamisika kana avo vakambozviedza vave nazvo kweinopfuura vhiki."
Zvirokwazvo kwete. Edza zvinhu zvakaringana usati wavatsoropodza? Ha, unopenga. Pano vanhu vanozviedza kwemaawa akati wandei zvakanyanya uye ale, kushoropodza.
Pindura kuna astolfo
Ndiri kuona kuti iwe hauzive zvirongwa zvekuyedza, kwaunoronga boka remabasa ekuita uye mhedzisiro yaungatarisira kuwana.
Ini ndanga ndiri gnome3 mushandisi kubva zvasvika pakuedzwa kwenyonganiso uye chokwadi ndechekuti nhasi handigone kunyunyuta, kunyangwe panguva iyoyo zvakanditorera zvakawanda kuti ndigadzirise, kunyanya kumenyu, nemifananidzo hofori.
Padanho rekushongedza zvinoita senge kwandiri, mashandiro emifananidzo akanaka kwazvo pamwe nekudyiwa kwegondohwe hakuwedzerwe tichifunga kuti idesktop iro pacharo rinoshandisa mhedzisiro, sekushambadzira, mimvuri, nezvimwe (613MB ine iceweasel yakavhurika ). Uye zvakare, pamwe nekuwedzeredzwa, zvakati wandei zvikanganiso zvesarudzo yekumisikidza zvinogona kupihwa.
Ini ndinofunga iro dambudziko chairo ne gnome iri mune yepakati nepakati yakareba nekuda kwemutemo wevagadziri nenyaya yekudzokera kumashure kuenderana kwe gtk3 uye kushomeka kweruzivo rwakazara (manyorerwo nezvimwe), izvo pakupedzisira zvinoita kuti vagadziri vazhinji vatamire kana kugadzira yako zvirongwa mu qt izvo munguva pfupi inotevera zvichazoguma zvaita kuti gnome isakosha.
Ndinovimba vanhu ava veGNOME vanoziva kuti mutemo uyu hauzovaunze mukubereka uye kudurura kudada uko kunovaratidza kuti vatange kuteerera kune izvo vashandisi nevasimudziri vanoda, kunyangwe kubva pane zvaunoona izvi zvisingaitike munguva pfupi. : /
Ini ndanga ndichiiyedzawo kwechinguva muFedora (16 na17) uye ndakaifarira, iine mamwe mawedzero, achichinja mifananidzo uye madingindira, iyo nguva nenguva tweak uye ndizvozvo. Hazvina kugadzikana kushandisa kana ukajaira, kunyangwe vamwe vachigara nekukurumidza kupfuura vamwe. Kunyangwe pandakachinjira ku KDE ndakaramba ndichifambisa mbeva kukona kuona maapplication.
haha zvinoitika kwandiri kana ndiri kuhwina, nguva zhinji ndinokanganwa ndotora chinongedzera kukona yepamusoro kuvhura xdddd menyu
Tatova vatatu vedu, nderekuti basa iri rinotyisa nyama (?), Icho ndicho chikonzero chakanyanya kukosha nei ndichiifarira kupfuura Kubatana nevamwe.
Ndanga ndichiishandisa kubvira vhezheni 3.0 muFedora uye ndagara ndichiiwana ichikurumidza uye ichibudirira. Izvo zviri pachena ndezvekuti izvo zvaunoda mifananidzo mitsva nekuti iyo yainounza nehurema inotyisa, asi hei, iyo inyaya yekushongedza, haina kukanganisa mashandiro.
Chekutanga pane zvese, makorokoto pachikamu pandev92!
PaGnome 3, ndakaishandisa kweinenge hafu yegore kana zvakadaro. Sezvo ini ndakaisa Debian nekukasira mukudonha kwa2011, kudzamara ndazoichinja kuita KDE muchirimo cha2012, uye ndinofanira kutaura kuti haina kundishandira. Kunyangwe izvi ndaisazvida zvachose, saka ndinonzwisisa zvakataurwa, nguva dzose kubva pakupokana, nezveGnome 3, nekuti iko shanduko yakakura kwazvo maererano nedesktop. Sezvaunonongedza muchinyorwa, ini ndinofunga kune akawanda mamiriro enharaunda.
Kusiya nyaya dzemaraibhurari, kuenderana neshure, nezvimwe kukombuta sainzi, ini ndinosiya zvangu kuti nei ndakasiya Gnome 3 ndichifarira, kutanga kweKDE, uyezve neXFCE (mandiri kuronga kuenderera kwenguva yakareba kuti ive yakafanana kuGnome 2 parizvino):
Muzuva rangu zuva nezuva, ndinofanira kubata nema emacs kunyora zvinhu muLaTeX, gnuplot, pdf muoni, imwe spreadsheet, Mathematica, nezvimwe. Kazhinji ndine madhesiki maviri nezvose izvi, mune imwe ini ndinoverenga uye mune imwe ndinonyora magwaro. Naizvozvo, mushure mekuita izvi neGnome 3 ndinogona kutaura kuti zvinondibhadharira XFCE muXFCE, muGnome 3 zvakandibhadhara zvakapetwa kaviri. Pamwe zvaive nekuda kweiyo interface kana nekuda kwekushaikwa kwekujaira kwazviri, ini handizive. Nekudaro, zvakafanana zvakaitika kwandiri paMac kumashure muna 2010. Ini handina kunzwa kugadzikana nazvo uye zvakapusa mabasa sekugadzirisa faira rine data zvakandibhadharira zvakawanda.
Ndiwo ruzivo rwangu. Ini ndashandisa Gnome 3, uye, kune zvandinoda, hazvikurudzirwe zvachose. Nekudaro, ini ndinoziva kuti kune mushandisi wepamba uyo anogona kushandisa PC yake yeoffice automation, kubhurawuza, nezvimwe Gnome 3 yakanaka kwazvo sarudzo.
Mukupedzisa, ndinofunga kuti iyo GNU / Linux nharaunda inofanirwa kumira kupusa nzombe nekurwa. Zviripachena kuti munhu wega wega ane zvavanofarira, uye izvo zvingaratidzika sezvisingabatsiri kwandiri kune mumwe zvinogona kuita sedhesiki uko kwavanogona kuita basa ravo zviri nyore.
Chekupedzisira uye semuenzaniso, ndinofunga kuti kunyangwe vazhinji vedu tisingade hutungamiriri urikutorwa neCanonical neUbuntu, hatifanire kukanganwa kuti vazhinji vashandisi vanoshandisa Linux kekutanga vanoita saizvozvo nekugovera uku uye nhasi vanozadza nharaunda mamwe ma distros. Senge yangu nyaya.
Ndine urombo nezve chidhinha! Kwaziso!
Iri tafura yakanaka, asi handigoni kubata pfungwa dzangu uye nekutenda kuArch neFluxbox handina zvinhu zvakawanda zvinovhiringidza.
«... kuti hapana nharaunda yakaipa, kana kubereka zvishoma muLinux, nekuti kugadzirwa kunoenderana newe nekugadzirisa kune iyo nharaunda, Kubatana, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, ese akanaka nharaunda, ese kumusoro kwauri ."
Chokwadi zvese zvinoenderana nekuchinjika kweumwe neumwe. Gnome Shell ichine nzira, rangarira kde 4 mukutanga kwayo yakashoropodzwa, yaive isina kugadzikana nezvimwe asi iwe unoona yave nharaunda yakagadzikana. Gnome Shell ine iyo «tweak chishandiso» unogona kuipa yakasarudzika yekubata, uchisiya nharaunda ine minimalist uye inoshanda inobata panguva imwe chete. Izvo zvakanongedzwa ndezvekuti shanduro dzazvino hadzienderane nedzakamboitika, ngatirangarirei nyonganiso yose yakaumbwa neCinnarch neManjaro yekusaramba ichienderera nesinamoni ...
Zana nemakumi mashanu ini ndinoda Gnome Shell ine "Ini handizive icho ..." Izvo ini zvandinoda, uye avo vanoramba vasina chokwadi kuti vangashinga uye vape wechipiri mukana. Ini ndichaisa iyo nyowani Ubuntu Gnome 13.04 (parizvino ndine ubuntu remix 12.10) iyo inotouya nekushomeka iyi desktop neiyi "flavour".
Mumwe mubvunzo unogona kukwidziridzira kuGnome-Shell 3.8 paFedora 18?
"Mumwe mubvunzo, unogona kukwidziridzira kuGnome-Shell 3.8 paFedora 18?" Kwete, haugone, iwe uchafanirwa kumirira F-19.
Unogona kuisanganisa nejhbuild; kunyangwe pamwe panguva painopera, iyo fedora 19 XD ichaburitswa. Kwete chaizvo, ini handina kumbobvira ndanyora gnome kunze kweiyo gentoo, saka ini handigone kukuudza kana zvichipa dambudziko rakawanda. Pachokwadi ichakukumbira gtk 3.8, uye izvo zvinogona kutyora mamwe maapplication akanyorwa achipesana gtk 3.6, saka iwe unofanirwawo kuvadzosera kuti vagadzirisezve zvinongedzo zvine simba, uyezve uyambuke minwe yako nekuti hapana zvinoenderana.
Kubva pane zvandakaudzwa nevanhu veFedora, zvinonyadzisa kuzviita uye zvinogara zvichizoguma zvichityora.
«Chingave chinetso kuumbiridza uye kuiisa. Pamwe pacho, panguva yekumisikidzwa kwekupedzisa, vangadai vakave neimwe nzvimbo yekusunungura "vakapindura.
Ivo vanotaura kuti muOpenSuse 12.3 iwe unogona.
kumagumo ndakaenda kubva kuFedora Gnome kuenda kuFedora KDE. Akatambura nekudonha nguva nenguva kana ganda rinotonhora. MuFedora KDE ndiri kufara uye ikozvino ndiri kushanda naKubuntu 12.04.2 LTS iri kuita zvakanaka chaizvo 🙂
Pandakaedza fedora gnome, yanga isina kuita zvakanyanya, chaizvo.
Mhoro. Ini ndakamirira Centos 7… .hehe. Ndiri kuedza kuzvirapa fedorian versionitis, uye ikozvino ndoona, senguva dzose, kuti yangu% & $ # »Lenovo inowirirana zvirinani neWindows pane neLinux ..
Iwe une Hardware ipi? Versionitis yakaipa iyo pc maererano nekuita dzimwe nguva.
@ pandev92: Iyo G470, Intel B940, Intel HD3000 Graphics. Iwo maviri ma distros anomhanya zvakanyanya pairi ndiFedora uye OpenSuse, yekutanga iri nani. Ubuntu 12.04, yaive sarudzo yangu yeLTS, inotonhora system yangu nekuda kweSandy Bridge nyaya uye kernel isingatsigire.
Saizvozvo, hachisi chakanyanya timu, asi izvo zvandinofanira kushanda nazvo. Ini ndichaona pandinogona kuchinjisa kunze kweanoverengeka zvigadzirwa, senge yakadzvanywa Epson purinda yeiyo HP imwe. Kunyange zvakadaro, yangu Windows 7 haina kubiridzirwa, saka unogona kufungidzira kuti handisi kuzopambadza $$$$, ini handisi sooo fan yekuita izvozvo, uyezve, sezvandambotaura, zvinoshanda chaizvo palaptop iyi .
Zvakanaka, iyo Intel hd3000, chokwadi chakanyanya kushata ..., zvakajairika kuti windows inoita zvirinani, mutyairi akagadziridzwa, iyo Intel inotanga kuve yakanaka kubva ku4000 mumaonero angu, kunze kwekuti windows inoda simba rakajeka ...
Ndakaishandisa kwemwedzi mitanhatu uye pakutanga ndaive ndakagadzikana, asi nekuda kwechimwe chikonzero mwedzi wapfuura ndakatanga kuda kuchinja tafura yangu uye haina kuzondikurudzira uye kubva pane zvandakaverenga kunze uko handisi ndoga uyo chimwe chinhu chakaitika Saka.
Mumwedzi mishoma ini ndakamirira maonero ako pane gnome zvakare 😛
tichaona XD, ndinovimba ndatove ndasiya danho re distroshop xd
kunyunyuta kwakawanda kunouya kubva kuG3, zvirinani kwandiri, ndiko kunetseka kwekugadzirisa zvine chekuita nematemu vs KDE. Zvakadii nezvekuwedzera kwavanazvo muG3 ichokwadi, ndizvo zviri nyore kuisa nekushandisa asi ini ndoda kuchinja madimikira muG3 sekushandura mbatya zviri nyore, kugadzikana uye nekukurumidza.
Mune yangu kesi, ndakaedza G1 kwemwedzi mumwe kana zvakadaro asi ini ndaisaziva maitiro ekugadzirisa nenzira kwayo sezvo ini ndichigara ndichizvienzanisa nezvivakwa mune zvimwe zvinhu zvine KDE uye izvo zvandiri kunzwa kuti zvine zvibereko.
Iyo G3 inogona kuve yakanaka uye inobereka kune vamwe asi iine adaptation curve yakati rebei zvishoma kupfuura dzimwe nharaunda uye izvo zvinogona kusvika mukugumbuka mukuwedzera kune chokwadi chekuti mune yega yega G3 inogadziridza iyo yekuwedzera mune dzakawanda kesi inomira kushanda nekuti haisisiri inoenderana uye iwe unofanirwa kumirira kwenguva yakareba kuti zvigadziriswe.
Ini handishoropodzi nharaunda asi asi kuti zvakandiomera kuti ndirambe ndichienderana nazvo kana uchifanira kugadzirisa kana chimwe chakafanana
Nekudaro ini ndinofarira maratidziro eGTK anotaridzika munzvimbo yavo hahaha pane izvo kana ndikaombera G3 iyo isina chinhu chekugodora pakuonekwa kune QT kunyorera 😛
Pamwe musikana ari kumashure kwako haana kunyemwerera kwakanyanya, asi ndiani, mumufananidzo wechipiri vanotaridzika kunge vakanaka.
tomoe yamanaka ehhee :), chiJapanese chidhori xd
Iyo inyaya yekuravira, ndakaedza kuishandisa uye ini ndaigona kungowana kusvika pazuva regumi uye ndakanga ndisingachakwanise haha.
Ini ndinoda enzeka nharaunda senge MATE kana Xfce zvirinani.
Ini ndinobvumirana zvachose newe, iyo DE kana WM muLinux / Unix dzakasiyana uye nenzira dzakasiyana uye ndomumwe wehunhu hwenyika yeLinux neUnix. Sezvavanotaura kunze uko, kuravira kunopaza kuita mhando uye ini ndinofunga kuti kutaura kuti zvakanaka kana zvakaipa ndizvo zvakaita baroque sekukakavadzana kwakauya pakutanga, huku kana zai.
Pane desktop yangu ndine Arch neXFCE, pane HP Mini 110 Arch Netbook ine GNOME Shell, imwe Acer ine Ubuntu LTS uye gadget ine Arch ine OpenBox. Ichokwadi ndechekuti ndinonzwa kugadzikana mune ese, asi GNOME ndiyo yandinofarira (nyaya yekuravira uye hapana chimwe chinhu).
PS Ini ndinoshandisa yangu parizvino laptop ine Windows 8 nezvikonzero zvewarandi uye hupenyu hwebhatiri. Ini ndinoronga kuchichinja asi handichazviita kudzamara ndawana yakanaka gadziriso isingandikuvadze kana kupfupisa hupenyu hwebhatiri uye izvi muLinux kunyangwe zvichikwanisika, kana zvichinyanyisa. Muchokwadi neWindows inotora maawa mashanu uye neLinux chete 5 uye chokwadi mutsauko wakawanda.
[YaoMing] Ndakaisa Nana Mizuki se Wallpaper [/ YaoMing].
Kunyange zvakadaro, joke iri mutsika uye kune zvinangwa zvenguva refu zvine GNOME 3, nekuti kana usingabvumire (uye zvishoma kune iro Wallpaper), unogona kusarudza XFCE uye / kana LXDE (kunyanya, kune windowsers).
Parizvino, ini ndinomirira kusvikira Debian Stable inogadziridza kuti ndikwanise kuisa MATE uye / kana LXDE mairi (tsika, tsika kwese kwese).
Lupe mudiki?. Ehe ... Gnome Shell iri kuramba ichiwedzera kutonhorera.
Chimwe chinhu chakafanana chakaitika kune vamwe vavo. Nekusvika kweUbuntu 11.04 ndakawana Gnome 3, ini handingamboishandisa nekuda kwezvishoma maficha ekombuta yayaive nayo. Ini nguva pfupi yadarika ndatenga chinhu chiri nani uye ndakaisa Debian ... uff, zvaive nyore sei kwandiri kuchinja mascreen, kubata zvese zvandaida nekungobaya mashoma, handizive, zvakangondinakidza. Yakashata Debian inomhanya 3.4 nekuti 3.8 inotaridzika kupfuura yakakura.
Nenzira, ndanga ndichifunga kuita chinyorwa chakafanana, nekuti kwemakore ndaverenga zvipembenene nehuipi hweGnome Shell uye zvakapera - kwandiri- sechinhu chikuru.
Kwandiri dambudziko harichisiri gnome-shell, asi iri kuwedzera kushomeka nhamba yemabasa nautilus, dambudziko iro rinotakurawo rinouya kune inotevera vhezheni ye ubuntu
Iyo nharaunda yakanaka, asi ukangoti iwe ukaisa mune yekuwedzera ekuwedzeredza iyo inononoka zvisina basa.
Dambudziko pacharo harisi iro, rakafanana nezvose, akawanda mawedzero haana kugadziridzwa, zvakafanana nezvakaitika ne firefox extensions munguva yakapfuura.
Ini handigovane chiitiko ichocho, chokwadi chinoshanda kwazvo kwandiri.
Yangu GNOME3 yakaifarira kubva pakutanga, kunyangwe senge iyo yese GNOME, kunyanya mashandisiro ayo, ini ndaigara ndichiiona isina chinhu; zvakare iyo vhezheni itsva haina kugadzikana. Ok, iri padanho rakakura rekuvandudza, asi iwo ekuwedzera ayo akakushandira iwe mune imwe vhezheni unomira kushanda mune imwe, hapana nzira yekuve nechena kutonga pamusoro pedesktop uye zvakare sezvandataura maGNOME application.
pachinyakare vanoshaya mashandiro eKDE kunyorera.
Nekudaro GNOME Shell ine mamwe mazano akanaka andakabatanidza mu KDE desktop yangu semakona hotspots, ayo anga ari chikamu che KDE kwenguva yakareba.
Shell richiri rakasvibira kwazvo, unofanirwa kuripa nguva.
Ini ndinobvuma, ingori nyaya yekujairira kuti uone kuti inoshanda sei. Unogona kuve netemu, vashanduri, tsvaga muGoogle nenzira inokurumidza kwazvo. nenzira dzekuwedzera.
haugone kushandisa compiz ergo ini handifarire; compiz haisati yakwikwidzwa, ini handisati ndaona chero chinhu chekuviga iyo parizvino
zvakanaka unofanira kuedza kde nezvose zvayo graphic migumisiro
Ini ndaisada Gnome shell pakutanga pandakaiyedza paUbuntu, asi kana ndichishandisa ElementaryOS ndakafarira mashandisiro eGnome Shell.
Iko chete kushoropodza kwandingaite ndeyekuti "tinoda kuti kumisikidza kuve nyore, sezvazvaive mu gnome2"
Zvinoenderana nepositi, ini ndakatanga kushandisa Gnome Shell kubva pakutanga uye ndakasiiwa nesarudzo yekugadzikana.
Asi nhasi ndiyo yangu yepamoyo # 2, yechipiri chete kuCairo Dock. (Ndiri kuchinja imwe uye imwe kuti ndisanetseke)
Kwandiri idesktop ine zvibereko kwazvo, mapfupi ekhibhodi anoita kubhurawuza nekushanda nekukurumidza (iwe unongoda kuti uadzidze) simba desktops chishamiso chisipo mune chero imwe nharaunda, akawedzeredzwa akanaka, iwo chete "asi" iwe Ini ndinoisa iko kushomeka kwemhedzisiro, asi kune avo vanoshandisa PC yavo KUZVIITIRA uye kwete kuyemura iwo madhiraidhi mhedzisiro ini ndinofunga ndiyo nharaunda yakanakisa. XD.
Ini ndinobvuma, kana uchinge wajaira (uye ndezvenguva pfupi). inova inoshanda kwazvo. kunyanya kana kuwedzerwa kuwedzerwa. senge kudonhedza pasi terminal, dudziro chinyorwa kubva kuShell, google kubva kuShell, isa maapplication kubva kumusoro. kungotaura mashoma. gnome inoshanduka kuva inoshanda kwazvo
Ehe, hongu, nharaunda inoiswa zvese, semuenzaniso kushandisa mutter kune gehena racho, Kde ine kwin asi zvinokutendera kuti ushandise munyori waunoda, irwo rusununguko uye gnome iri kuzvibvisa zvese. Zvinotaridzika zvakanyanya uye zvakafanana nema macs uye kukunda uye hunhu hwaGnu / linux ndiro basa rechidzidzo; zvirinani ndinofunga kudaro
Ini ndinopokana kuti pane chero munhu anopenga anochinja kwin for compiz ..., kunze kwekunge vachida chakakosha chiitiko, compiz yakanyanya kusagadzikana kupfuura kwin xddd, uye nokutendeseka, kana ivo vakasarudza kumanikidza kugunun'una, zvichave nekuti kugunun'una chete akazadzisa zvavaida.
Ini handizive kuti iko compiz kusagadzikana kuri, ini handina kumbobvira ndanyatso mhanya mazviri. Uye zvinhu sezvazviri, compiz ine kuita kuri nani pane kwin, yekupedzisira yandakashandisa uye inorova zvakanyanya kupfuura mota yasekuru vangu, ine zero fluidity
Zvakare sezvo gnome shell isiri chimwe chinhu kunze kwekukopa kopi yemishini yekudzora uye mac launchpad ingadai yakasiya seizvi, ndiko kuti, kumwe kunyorera pasina kubvisa zvakasara enharaunda, kana uchida iwe unogona kuishandisa uye kana zvisiri, Aihwa
Zvakanaka, ingo enda kugoogle uye uchazoziva kusagadzikana compiz kuri, :) kunyanya iyo 0.9
Sezvaunotaura, inyaya yekuravira uye / kana tsika!
Ini ndashandisa Gnome Shell muFedora 18 uye Sabayon futi asi, sekuravira kwangu pachezvangu kuve nediki desktop, ndinosarudza LXDE, kana Openbox.
"Kwanga kuri nyonganiso, kuchinja mawindo kwakava kupenga kwandiri"
Uye ndicho chinhu CHETE chandinoshoropodza pachena Gnome Shell .. ndosaka neXFCE ndiri kukurumidza kupfuura kushandisa Gnome Shell.
Zvese zvimwe zvakanaka, nharaunda inoshamisa, kunyangwe ini ndiri muXFCE ini ndinoisa "gnome-terminal, gnome-system-monitor, eog, gedit, nautilus"
Gnome 3 ine ganda rayo rakafanana nekuve nemawindows 8, chete zvinonyanya kushoma.
Ngatione .. Rakanaka kwazvo ganda, mari yakawanda uye marara .. Ok, asi ndinoshamisika, patinoenda kubva kudesktop tichishandisa zvishandiso zveGNOME.Saka chii? Gedit ichiri nyonganiso, totem isingataure, webhu iri munzira chaiyo yekutenda kune webkit asi huya, haina zvakawanda .. Zvisinei.
Murume kana tikasvika pakudaro, dhiragoni mutambi iplasta xD iyo kana zvinyorwa zvidiki padivi zvaunogona kusarudza, konqueror ibrowser isingafadzi, amarok inorema kwazvo nezvimwe, uye pakupedzisira unozopedzisira waisa smplayer, clementine, chrome nezvimwe xD
Gedit inyonganiso? hapana vamwe vanyori mune gtk +, ko totem nyonganiso? gnnome mplayer, webhu haina kunaka kudaro? gadza chrome, firefox, opera ...
rhythmbox ndeye sh ...? dzikama gadza xnoise, beatbox, sonata nezvimwe xDDD
Iko kunyorera kwenzvimbo ndiko kushoma, chinhu chekutanga chandinobvisa.
Ini ndanga ndichitaura nezvechirongwa chairo chaicho, nekuti ini ndinoisawo VLC, SMPlayer ... nezvimwe. Uye tarisa pauri, ini ndichine yakawanda yakanaka desktop kupfuura Gnome Shell uye iyo inoshandisa zvishoma .. HAHAHA, asi sekutaura kwedu pano: Nyaya yekuravira .. 😛
Edito: Uye isu patinotaura nezve Nautilus, unoitei? Chii chaunoisa?
nautilus? Handisati ndambochinja, ini handidi rinopfuura rimwe chete bhurawuza, senge mu dolphin, zvese zvandinoita kuvhura mafaira uye dzimwe nguva kushandisa yekutsvaga sarudzo, ini handidi zvimwe.
che totem yakanaka uye gedit iri rakanakisa mupepeti, unogona kuisa plugins pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda
vhidhiyo yekudzidza gedit
Gnome Shell, haina kushata kudaro ... asi haisi iyo yakanakisa XD
Kusarudza iyo DE yatinoda kushandisa, kuzviisa pasi zvinhu, aesthetics, nyore kushandisa, nezvimwe zvinopinda mukutamba.
Asi kutsanangura zviri nani kana zvakanyanya (mazwi asinganzwisisike, nenzira) isu tinofanirwa kufunga nezvezvinhu zvatinogona kuyera zvine mwero, senge iyo KUSHANDIRA (pachave nevaya vanopokana ichi vachiti havazi vese vanogona kuita yavo DE iyo zvakafanana, asi mubvunzo ndewokuti sarudzo dziripo kana kuti dzisiri, zvisingaite kuti mushandisi anoziva kuzvishandisa kana kwete.)
MODULARITY (Izvi zvinoenderana nekuita).
KUSANGANA (pamwe nezvimwe zvivakwa, iyo nyika yema distros aripo, mamwe maDE, iwo mamwe ma DE mumavambo ekutanga uye akazotevera).
Uye sezvo isu tiri muchizvarwa cheFOSS, funga zvakare nzira iyo purojekiti inoenda nemushandisi uye nharaunda dzekuvandudza.
Chokwadi ndinokanganwa zvimwe zvinhu, asi ndichifunga izvi uye ndichitsvaga chiyero pakati pavo, ndinofungidzira hapana mubvunzo kuti DE inotora korona.
Kana mushure mekutarisisa zvinhu izvi uye nekunakidzwa kwechokwadi DE isiri iyo "yakanakisa" inosarudzwa, sarudzo inoremekedzwa chose, nekuti inoitwa pane zvido uye kwete kupusa kwekufungidzira kunoenderana nekushambadzira, kusaziva (kwekubatsira kweimwe sarudzo ) kana tsikawo zvadzo.
Kuve wakanyanya kukwana uye unogadzirisika hazviite kuti ive yakanakisa, mac osx haisi iyo inogadziriswa zvakanyanya, asi vazhinji vanoifarira, nekuti inozadzisa izvo zvinoda vanhu, kugadzikana. mashandiro uye zviwitsi zvemaziso, zvimwe zvese zvinhu, zvinhu zvevashandisi vemasimba.
"Kuva akakwana zvakakwana uye kugadzirisa hazviite kuti ive yakanakisa,"
Ini ndakati: kuita, modularity, kuenderana, uye hukama nenharaunda, uye navo tsvaga chiyero. Hapana kana nguva yandakambotaura "yakakwana"
"Mac osx haisi iyo inogadziriswa zvakanyanya, asi vazhinji vanozvifarira"
Maka mamiganhu ekutaura kwangu mukati meiyo FOSS zvakasikwa, kunyange hazvo vazhinji vachisarudza chimwe chinhu chisingaite kuti zvive nani (kana isu tiri vechinangwa uye isu tichiona zvakajairika uye zvisina-zvakatarwa zviitiko).
“Nekuti zvinosangana nezvinodiwa nevanhu, kugadzikana. mashandiro uye zviwitsi zvemaziso, »
Jekesa kuti mibvunzo yekuzvibata haina musoro mukugadzirisa mabhenefiti eDE, uye izvo hazvina kufanana nekusarudza imwe yekushandisa kwako wega. Nenzira, ndiri vanhu uye KDE inondipa kuita, kugadzikana uye zviwitsi zvemaziso (uye nezvimwe zvakawanda).
Kana isu tichida kuziva kana kazhinji muto weorenji uri nani pane iyo Coca-Cola, tinoona zvakanakira zvepanyama uye zveupfumi uye yakareba zvakadaro. kuti vanotiunzira uye isu tinogumisa kuti muto uri nani.
Pamwe mumwe munhu anorwara neorenji, kwavanogara ivo havagone kuwana kwazviri, kana ivo havangodi kuravira, asi idzo dzakanangana nenyaya uye / kana zvinoenderana nenyaya dzekuzviisa pasi, asi muto wacho uri nani.
Kana mushure mekuziva izvi, kune avo vanosarudza kunwa Coca-Cola pachinzvimbo chemuto (dzimwe nguva ndinoita) sarudzo inoremekedzwa, asi kana iri nekuda kwe:
Ini ndinotora mazwi (go ego XD) «kupusa kwekunyepedzera kunoenderana nekushambadzira, kusaziva (kwebhenefiti yeimwe sarudzo) kana tsikawo zvayo.»
Icho chinogona kunge chiri chisarudzo chakatsungirira.
Ingo tsvaga zvishoma kune yekutangapad, mune compiz 0.9 bugtracker, uye iwe uchazoziva. Uye ne nvidia vane bhagi kwemwedzi inokonzeresa kuti hwindo riende nhema dzimwe nguva.
XD Iko kutaura hakuna kuenda pano, handiti?
Iwe murume kana iwe uchida muto weorenji pane coca cola, ipapo iwe xD, iyo coca cola iri chiuru iri nani xddd, orenji inosemesa xD uye ine acidic, iwe unofanirwa kuwedzera hafu yekirogiramu yeshuga
hahaha Chaizvoizvo, iwo ndiwo maitiro andanga ndichitaura nezvawo, iwe unenge wazviona kakawanda mu fanboys emamwe ma distros.
Mhoro! Ini ndaida kugovana newe kuti chiitiko changu neGnome-Shell chiri VERY POSITIVE. Uye zvese zveyakareruka mukana iyo yainopa. Ini ndoziva kuti hazvisi zviri pachena izvo zvinouya nekutadza, asi ... webhusaiti yako ine zviwedzero! Chinhu chinonakidza. Ini ndinoisa anenge gumi nemaviri ekuwedzeredza uye ini ndine VERY CUSTOMIZED desktop uye inononoka kwazvo kana zvasvika pakuwana ese nzvimbo nenzvimbo. Kana zvichinzi pane kushomeka kushoma ... tarisa kune zvinowedzerwa! Uye zvakare, ivo vanorairwa kubva kumusoro-soro kusvika mukurumbira mukurumbira.
Chaizvoizvo, ndinozviona ZVINONYANYA ... kana izvo "zvidobi" zvazivikanwa.
Ini ndaishandisa gnome 3.6 kweanenge mavhiki matatu epc yavakandikweretesa kubasa uye handina kukwanisa kuifometha: p
Ini ndakakwanisa kujaira mashandisiro ayo asi haina kundipa chokwadi, kushomeka kwekugadzirisa ndiyo poindi yekutanga inopokana nazvo, haugone kuchinja zvinhu senge chinzvimbo chekuvhara, kudzikisa mabhatani, nezvimwe kuruboshwe rwe windows kana kona inopisa seKDE.
Zvakare, dambudziko hombe randinowana randinoti ini ndinobudirira mu kde iDolphin. Ini handina kuwana chero faira rekutsvagisa mune gnome inouya padhuze mukuita. Semuenzaniso, kutsanya faira kusefa ne ctrl + 1, faira zvemukati kutsvaga, kupatsanura skrini, nekukurumidza koni ne f4, kusangana ne git, svn, ssh, nezvimwewo pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
* kutsanya faira kusefa ne ctrl + i
Kutendeseka kwave nani zvakanyanya .. zvirokwazvo handaizoshandisa yakakwana DE .. asi kana ndikaziva kuti kufambira mberi kwakakosha .. Ndinoikurudzira pamusoro peiyo nyangadzi inonzi kubatana ..
Hazviratidzike senge zvakashata kwandiri, asi hapana kwese pedyo nekunaka kde.
Kubva pandakatanga muGNU / Linux ndakasarudza Gnome-GnomeShell, ndakashandisa Fedora 17 ne KDE kwemwedzi mishoma uye chokwadi ndechekuti ndaichifarira asi ini handisi pane iro desktop handizive kuti nei. Ndisati ndangova novice (ini ndichiri asi ndiri mudiki pane pakutanga) ndaifarira GnomeShell asi chaishaya chimwe chinhu kuti chimwe chinhu chaive dhoko asi sezvo ini ndisisaronge kushandisa doko handichazvioni zvichidikanwa.
Mhoro nenyaya yako!
Ini ndinofunga ndeimwe yemafungidziro mashoma asiri ekunyanyisa.
kune rimwe divi gnome nehombodo yaro ndakagara ndichifarira!
kugadzirisa kwakaoma asi zvinogoneka, iwe unongoda kuziva diki css uye zvimwe zvinhu.
Chinhu chega chandisingade nezve gnome shell ndeye kana uchidhonza faira kubva nautilus kuenda pahwindo, asi hapana chinobva kuna Vhura ... hachigoni kugadziriswa.
kune vamwe vese ini ndinoda gnome shell uye ini ndinoenderana chaizvo nazvo
Ini ndinofunga iyi sarudzo yakanaka uye inokurudzirwa zvakanyanya kana iwe watove kufinhwa neiyo yakasarudzika DE.
Pindura kune dartre
Ndakagara ndabva kuGnome uye ndinofunga kuti shanduko yapfuura uye chikamu chayo chinotyisa. Yakagadzirirwa kuve minimalist uye yekushandisa yekuwedzera (nevashoma iwe hauchakwanise kugunun'una nezve kusabereka, izvo semuenzaniso muUbatanidzwa ini handigone). Kwemakore mazhinji isu tave tichifungidzira nezvinhu zvakaita compiz. Asi ini ndaigara ndichifunga kuti izvo zvinhu zvakapa Linux chimiro chisiri chehunyanzvi kana chakakomba. Zvese zvinogoneka kumisikidzwa, asi iwe waona iwo Screenshots ematafura evanhu…. uye pakanga paine majee. Urwu ndirwo rusununguko rweLinux, asi zvakare yakauya nemutengo. Ini ndashandisa zvese izvo zvigadzirwa (ndichine zvimwe zvinotyisa zvidzitiro zveGnome 2 neCompiz kana dzidziso pamusoro pekuti zviitwe sei kuti zvishande), asi kusvikira nhasi, kana Gnome ichitevedza nzira yakatarwa, ini handina chinangwa chekuzvigarisa kune imwe desktop, zvishoma pane yangu huru komputa. Pamusoro peshanduko dzese padanho repurogiramu (GTK3 nevamwe) ini ndaizoratidzira kuyedza kwekubatanidza uko zvishoma nezvishoma kunopa Gnome kuwedzeredza uye hunyanzvi. Ndiri kutaura nezve ako maficha ayo anowoneka zvishoma nezvishoma uye kuti nekufamba kwenguva achakuchengetedza iwe nekuisa mamwe awanga uchishandisa: Mumhanzi, Mifananidzo, Karenda, Clocks, nezvimwe. Ndiri kufara uye yangu yepakati-tema kumisikidzwa ichave iri: miniPC ine XFCE, yekurodha pasi neTV, yangu laptop seyakakura komputa ine Gnome 3 Shell uye Smartphone / Tablet ine Android / iOS kana chero chinouya… kure nemusha.
Gnome 3 haina kunyanyoipa? … Ugh… Hauna kungorasa muverengi zvishoma.
Kana nekutaura zvandinofunga, ndicharasikirwa nevaverengi, kugamuchirwa ndiko kurasikirwa ikoko 🙂
Imwe shoma ipapo ..
Dai Simba rive newe.
Ini ndaive negnome shell kwemwedzi mishoma mu ubuntu asi ndakadzokera mukubatana, ndakaifarira zvakanyanya asi ndakadanana nekubatana
Ini ndinoshandisa uye ndinoifarira zvakanyanya, zvinonakidza sei
chirongwa ichi chiri kuenderera mberi: D.
Ini ndinoshandisa Uuntu-Gnome, asi mufananidzo wacho hauratidzike sezvinoita naSabayon.
Chimwe chinhu chevatariri, iyo mifananidzo iri pahwendefa yakapwanywa.
Wakaisa gnome, mumushandisi mushandisi?
Ini handina kubata iyo Chrome, Chromium, kana Safari mushandisi mumiririri. Ini ndakachinja iyo dzimwe nguva, kune zvimwe zvinhu. Chrome inokutendera kuti uzviite pasina kuisa chero chinhu ... Asi ini handizive chekuwedzera kuti riitise iyo Gnome icon.
Kubva iyo iPad inoshanda nemazvo. Kubva kuChromium zvinowanzoitika. Kubva Chrome haina kana kubuda kuti ini ndinoshandisa Ubuntu:
-iPad: safari + piritsi
-Chromium: chromium + ubuntu + indeterminate mufananidzo
Mune chrome, iwe unofanirwa kushandisa mushandisi mumiririri switch switch uye utarise chinyoreso pano, icho chinotaura nezve maitirwo aunofanira kuchigadzirisa.
Ona mapfekero andiri kuita uye gadziridza akakodzera.
unogona kundipa plss>.
Uri chidhori changu !!! : D !!! Zvidhori zvechiJapan uri u-15? zvidhori zvakanaka kwazvo
rino makore gumi nemasere xddd, asi kana iwe uchida kupotsa zvishoma, google minisuka xD, kana jappydolls nezvimwe xdddd, zvese zvakanaka>>
Ndakaishandisa, ndiri kuzopa mukana mutsva ne3.8.
Handizive kuti handizvione zvakashata kana zvakaipa, ndinonzwa kuti ndizvo zvinodiwa nemumwe munhu uye anogona kuzvishandisa, ndinoda asi kana ndichigadzira zvinhu musoft software gnome-shell inoshandisa zviwanikwa zvandisingakwanise kutambisa uye ndakasarudza xfce, asi gnome shell iri Zvakanaka, kunyange ini ndichisarudza kubatana xD, ndinoda mapfupikiso akafanogadzirirwa uye mu kde ndinoda kubata kwekukwirisa nemabasa ayo asi pachezvayo interface yandaifarira zvakanyanya kubatana kunyangwe ndaizoda kuva 4 pc imwe neimwe iine xfce, kde, gnome shell uye kubatana
mumwe munhu anoziva kuisa zvakanaka gnome Shell 3.8
MuUbuntu GNOME 13.04, Gnome 3.8 yakaiswa ichiwedzera iyo PPA sezvakatsanangurwa pano https://launchpad.net/~gnome3-team/+archive/gnome3
Ndakafunga kuiisa kuti ndione kuti chii chitsva (vanozoonekwa zvishoma nezvishoma) uye nekuti iyo 3.6 inouya neUbuntu 13.04 haina kundishandira ... Iyo Gnome Shell yaifamba zvishoma zvishoma. Iye zvino zvese zvinofamba mushe uye neakawedzera ekuwedzera akarongedzwa nechikwata cheGnome (chepamutemo)…. desktop yangu yakanaka.
Zvakanaka, kana Gnome shell isina kunyanya kushata, inongoshaya yakanyanya kuita, ndinoifarira zvakanyanya 😀
SAMBA kuisirwa uye kugadzirisa paUbuntu 12.04